မြန်မာစစ်တပ်ကို ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုလုပ်ဖို့ ကုလ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း တောင်းဆို - ข่าวสด
မြန်မာစစ်တပ်ကို ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုလုပ်ဖို့ ကုလ သ...
18 ก.ย. 2564 - 21:15 น.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်ကောင်စီရဲ့ သတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ”ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မယ့်၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့၊ ထိရောက်တဲ့၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့၊ ရလဒ်ကိုအခြေခံတဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေ’ အရေးတကြီး လုပ်ဖို့ လိုနေတယ်လို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းက ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူးတားရက်စ်ကို စာရေးသား တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ရေးသားထုတ်ပြန်တဲ့ စာထဲမှာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ စစ်တပ်ကို အထီးကျန်ဖြစ်အောင် ဖယ်ကျဥ်ထားဖို့နဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်မသွားမချင်း စစ်တပ်ကို ထောက်ပံ့တာတွေ ဖြတ်တောက်ထားဖို့အတွက် ခိုင်မာတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေ လိုအပ်တယ်လို့လည်း ဖော်ပြပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ရက်ပေါင်း ၂၂၀ ကျော်အတွင်း လူ တစ်ထောင်ကျော် သတ်ဖြတ်ခံရသလို ထောင်နဲ့ချီပြီး ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေ ခံနေရတယ်လို့ ဦးကျော်မိုးထွန်းက သူ့ရဲ့စာထဲမှာ ရေးပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၉ ရက်က မကွေးတိုင်း မြင်သားရွာမှာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အရပ်သားတွေအပါအဝင် အနည်းဆုံး လူ ၁၈ ဦး သေဆုံးကြောင်းနဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှာလည်း အဲဒီဒေသက နှမ်းခါးရွာမှာ အိမ်ခြေ ၃၆ လုံး မီးရှို့ခံရကြောင်းလည်း ဖော်ပြပါတယ်။
အဲဒီစာနဲ့အတူ စာမျက်နှာ ၇ မျက်နှာပါ အပတ်စဥ် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေ စာတမ်းတစ်ခုကိုလည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဆီ ပူးတွဲ ပေးပို့ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
NUG နဲ့ စစ်ကောင်စီ အတွက် အရေးအကြီးဆုံး သံတမန်စစ်ပွဲ
ကုလအထွေထွေညီလာခံ- စစ်ကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ် မတက်ရ၊ ဦးကျော်မိုးထွန်း စကားမပြောရ
ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာ သံအမတ် ဘယ်သူ ဖြစ်မလဲ
ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်က ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် / မြန်မာအသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပြီး စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ ပူးတွဲအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုလည်း မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်တက်ရောက်ခွင့်ရနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အထွေထွေညီလာခံကနေ NUG က တင်ထားတဲ့ ဦးကျော်မိုးထွန်းကို ဆက်အသိအမှတ်ပြုမလား၊ စစ်ကောင်စီက တင်သွင်းတဲ့ ဦးအောင်သူရိန်ကို ရွေးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူမှ အတည်မပြုဘဲ ဆိုင်းငံ့ထားမလား ဆိုတာ အသစ်ဖွဲ့ထားတဲ့ ၉ နိုင်ငံပါ အရည်အချင်းစစ်ကော်မတီကနေ ဆုံးဖြတ်ရဖို့ရှိပါတယ်။
အထွေထွေညီလာခံရဲ့ မူလအစီအစဥ်အရတော့ အထွေထွေညီလာခံနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ မြန်မာဘက်က မိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့ အစီအစဥ်ရှိပါတယ်။
အထွေထွေညီလာခံကို စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်ခဲ့
อัลบั้มภาพ မြန်မာစစ်တပ်ကို ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုလုပ်ဖို့ ကုလ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း တောင်းဆို